20 amin'ireo hira tsara indrindra tokony hatoriana - -Kevi-Pitantanana
20 amin'ireo hira tsara indrindra tokony hatoriana
Ny resin-tory dia mety, amin'ny fomba mampihomehy, no mampahory indrindra ny andro ho an'ny maro amintsika. Ny fidinana ambany matetika dia mivadika ho ratra rehefa miady mafy mba hipetraka sy hihataka.
Raha efa nanambola vola tamin'ny lavender frantsay ianao ary nanisa ondry tsy manam-petra dia mety ho tonga ny fotoana hanandramana zavatra vaovao.
Nisafidy hira 20 izahay izay hanampy anao hitsoaka, na inona na inona fanao.
Laura Marling - matoatoa
Ity hira ity dia malefaka nefa faly, ary hampitony anao amin'ny toerana milamina. Ny tonony dia tsara sy tsotra, noho izany dia tsy mila mandinika azy io ianao, mankafy fotsiny ireo feon-kira.
Alikadia Fleet - Fihirana Hira Fotsy
Araka ny tondroin'ny lohateny, ity hira ity dia manana kalitao mitovy fihirana ho azy. Hira maivana izy io, saingy miaraka amina firaketana an-tsoratra manankarena mavesatra, mamela anao ho rendremana amin'ny fomba tsara indrindra.
ahoana ny fahitana fahendrena rehefa miteny
Izay rehetra nataon'i Sigur Ros
Tsy mampino fotsiny i Sigur Ros, noho izany dia manolo-kevitra ny hihaino ny rakikira mahafinaritra ataon'izy ireo izahay. Ity tarika Islandy ity dia tena mahay mampandeha torimaso na dia ireo vatana tena miady saina indrindra aza, ka mankafy.
Ny XX - Intro
Mahafinaritra ity ho an'ireo sahirana matory. Hira somary tsotra izany ka tsy misy tokony hifantohana afa-tsy ny misintona moramora.
Ny volontany ambanin'ny tany - Maso manga manga
Ity hira ity dia misy tononkira mahafinaritra ka tsara mihaino raha olona mandinika tsara ny teny ianao!
Fanafihana be dia be - Teardrop
Ny horonantsary mozika dia zazakely ao am-bohoka ary ity fifangaroan'ny kapoka hypnotic sy feon'anjely ity dia hahatonga anao hatory toy ny zazakely amin'ny fotoana fohy.
Izay rehetra nataon'i Ludovico Einaudi
… Dia azo antoka fa hampiala anao. Mivonto tampoka ity mozika piano ity indraindray, nefa koa feno feo malefaka hamelombelona anao. Avelao izy hitelina anao rehefa miomana hatory ianao ary miomana hihataka.
Malaza amin'ny fisehoany amin'ny doka M&S, ity hira ity dia manankarena sy manankarena. Raha 'rendrarendrika' hira iray, dia io no izy. Hahatsiaro ho salama avy hatrany ianao eo am-panisana ireo ondry ireo…
Ny Herinandro - Nahazo izany
Mety ity ny feon-kira misy ny hetsika 50 Shades, saingy tsara ho an'ny zavatra hafa azonao atao eo am-pandriana ihany koa - matory! Miroboka amin'ny feo setroka ary avelao ianao ho rendremana.
Kanto fotsiny ny naoty an'ity hira ity. Tena tsara tarehy tokoa. Ho hitanao fa very tanteraka ao amin'ny gadona ianao ary tsy ho ela dia ho rendrika hatory miaraka amin'ny saina tony sy foana.
Mety tianao ihany koa (mitohy etsy ambany ny lisitra):
Ahoana ny fomba fatoriana haingana: Fomba 8 hihemorana amin'ny ora firaketana
Raha mahatsiaro reraka ianao any am-piasana dia andramo atao ireto zavatra 11 ireto
Ity hira ity dia tsy dia manta sy mampalahelo toa ny sasany hafa, ka tsy ho sosotra tampoka ianao amin'ny zavatra ao an-tsainao! Hamafana moramora ny sainao amin'ny fihenjanana izany, mamela anao hiala sasatra.
mifikitra loatra amin'ny sipako ve aho
Bon Iver - ara-bakiteny na inona na inona!
Ny ankafizinay dia misy ny Holocene sy ny Skinny Love, fa angamba tsara kokoa ny mihaino izay rehetra nataony ary manapa-kevitra ho anao.
Lykke Li - Fantatro ireo toerana
Lykke dia mpanakanto tsy mampino ary ity no iray amin'ireo hira malaza indrindra ao aminy. Melanolika amin'ny fomba iray izay hampiala ny sainao sy ny vatanao izany nefa tsy hamela anao ho sosotra.
Ny ankamaroan'ny hira nataon'i Portishead dia mety mifanaraka amin'ilay volavolan-dalàna ho fatoriana, saingy ity làlana manokana ity dia mampiala anao amin'ny toerana milamina sy milamina miaraka amin'ny gadona bass sy synthal izay miaraka aminy.
Nalaza io hira io tao anatin'ny 500 andro fahavaratra nefa mahafinaritra amin'ny azy manokana. Miaraka amina tononkira mahafinaritra sy gadona mampitony dia ho vonona hatory tsy ho ela ianao.
Oh Wonder - Tsy misy anao
Miala sasatra ny tononkira raha poppy ny gadona, ka omeo fotoana izy dia jereo ny fandehany. Mety ho be loatra amin'ny eritreritry ny olona sasany ny fikirakirana azy, fa mba henoy ary fantaro hoe inona ny fomba mozika mety indrindra aminao.
Alexi Murdoch - Miaina
Raha toa ianao ka mila fampahatsiahivana ny maha-zava-dehibe ny fofonaina lalina sy moramora hampialana voly ny vatanao sy ny sainao, ity lalana tsotra ity dia tokony henoina.
Enya dia volamena tanteraka rehefa tonga amin'ny torimaso. Hanandratra ny toe-tsainao ity hira ity rehefa mampilamina anao amin'ny toerana fialan-tsasatra lalina.
Inona no feon-torimaso izay ho feno amin'ny Coldplay mahazatra? Tena mampihetsi-po tokoa ity hira ity fa milamina amin'ny fotoana iray ihany - tonga lafatra amin'ny famaranana azy.
Vary Damien - Rano mangatsiaka
Raha mila matory be ianao dia avelao ity duet ity handray anao eny an-tànany ary ahetsiketsikao hatrany. Izy io aza dia misy moanina miverimberina miantso hafatra miafina any am-parany.
zavatra hilalaovana rehefa mankaleo ianao
raiki-pitia amin'ny sipako
aza mijery ny mason'ny olona
indraindray mahatsiaro tena ho tsy manana namana aho
ny fomba fanaraha-maso maso ny fahatomombanan'ny